Servo feeder muchina vagadziri & vatengesi - China servo feeder muchina fekitori
GO, WUL-akateedzera Servo Anopa Muchina
Hunhu 1. Kuyera kugadziridza kunotora kuverenga kwemagetsi dijitari kuverenga mita; 2. Yakakwira chaiyo screw inofambiswa neakanaka uye asina kunaka maviri-nzira ruoko mawheel kudzora upamhi kugadzirisa; 3. Iyo kukwirira kwetambo yekudyisa inogadziriswa nemota inosimudzwa erevheta; 4. Chivharo chehomwe chinotenderera chinodzivirira chigadzirwa chinoshandiswa kune sheet sheet; 5. Kudya roller uye kururamisa roller kunoitwa neakakwira chiwanikwa chinotakura simbi (yakaoma chromium yakanamirwa kurapwa); 6. Hydraulic yekutsikirira ruoko mudziyo; 7. Iyo giya mo ...
SAF-B-akateedzera Servo Anopa Muchina
SRF-A-Series Roller Servo Anopa
SAF-A-akateedzera Servo Anopa Muchina
Yekumhanya Yekumhanyisa Roller feeder